အနံ့မရှိဘဲကမ္ဘာ့ငါးမွေးမြူရေးလောက်အတွက်ပထမဦးစွာ - Yuri BSF အကြောင်း
Yuri BSF အကြောင်း
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - အကြောင်း Yuri BSF တသူ့ကုမ္ပဏီခဲ့သည် ကမ်ဘာပျေါမှာအနံ့မရှိဘဲရှေ့ဆောင်ခေတ်မီ BSF လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး, အနံ့မရှိဘဲခေတ်မီစိုက်ပျိုး bsf အောင်မြင်သောယာဉ်အဖြစ် 10 Yuri ထူးချွန် BSF ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင်များ၏အနံ့မရှိဘဲအင်းဆက်ပိုးမွှားလောက်၏စိုက်ပျိုးမှုဖွံ့ဖြိုး။
ဖလောင်းကောင်အနံ့ကို အသုံးပြု. စိုက်ပျိုး၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်
Market ကစွန့်ပစ်, RT ကို
ကစော်ဖောက်ခြင်းမရှိဘဲ, ဆေးဝါးမပါဘဲနှင့်အင်ဂျင်မပါဘဲ။ မီဒီယာသို့မဟုတ်အလွှာနှင့်အတူဆိတ်ကွယ်ရာကိုအလွယ်တကူနေရာတိုင်းတွင်ကျယ်ကျယ်မရရှိနိုင်အဖြစ်ရရှိသောနှင့်လျစ်လျူရှုခံရလေ့ရှိပါတယ်။
, ညစ်ပတ်ညစ်နဲ့အနံ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တောင်မှသုံးမီဒီယာကြောင်းဘာသာရပ်ကိစ္စ။ ကျနော်တို့ကပစ္စည်းလုနီးပါးအခမဲ့ကြောင့်လယ်သမားကပိုအကြိုးရှိနိုငျအောငျချွေတာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအတူသုံးမီဒီယာနှင့်ဖွဲ့သောအောင်မြင်မှုများ။
အင်ဒိုနီးရှားမှာလည်းကျနော်တို့ဂရုစိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ permasalahn Yuri BSF အမှိုက်သရိုက်, မိလ္လာနှင့်အမှိုက်။ ငါတို့မြော်လင့်သည်ဤအနံ့မရှိဘဲလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များအင်ဒိုနီးရှားကပိုစင်ကြယ်စေခြင်းငှါငါတို့ကိုအားလုံးအတှကျတစျခုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်နှင့်ရူပါရုံကိုရှင်းလင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်, အမည်ရ Salam SAVE နှင့် BERSIHLAH Indonesiaku အတွက်ရုပ်ပြ။ လယ်သမားငါး၏အနံ့မျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိဘဲလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှတဆင့်အစာကျွေးပေးလွတ်လပ်သောငှက်နှင့်တွားသွားသတ္တဝါများ, အာဟာရနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏ကီလို Rp2.500 -Rp3.100 န်းကျင်ပရိုတိန်းမြင့်မားခြင်းနှင့်သာကုန်ကျစရိတ်ကြွယ်ဝလုပ်ကျွေးလော့။
ထိုကဲ့သို့သောအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဆက်ဆက်မျှော်လင့်ရသည်နှင့်ပိုမိုလယ်သမားသူတို့ရဲ့မွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်တိုးမြှင့်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအစာကျွေးဖို့မတတ်နိုင်သောကြောင့်, ဒေဝါလီခံသှားသောလယ်သမား၏အမှုများစွာစဉ်အတွင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
တိရိစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်း 70% ရောက်ရှိနိုင်မယ့်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနေဆဲစာရွက်ပေါ်တွင်ရေတွက်။ ဒီကုန်ကျစရိတ် 80% အထိထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်စတင်နေကြသည်သောသူတို့အဘို့။
ဤသတင်းစကားကိုစာအုပ်ဆိုင်တွင်ရောင်းချစာကျွေး၏စီမံခန့်ခွဲမှုအခနျးမှာပေါ်တိုင်းဖတ်စာအုပ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့အနံ့မရှိဘဲ bsf ခေတ်မီလယ်ယာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များဖြစ်လာလောင်း၏စိုက်ပျိုးမှုတိုးတက်လမ်းကိုအပေါ်လက်ရှိစာပေနှင့်အတူလက်နက်ပါ။
ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု Method ကိုလောက်
ရလဒ်-လောက်ပေါများခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာကုသဘို့သင့်ကိုကျန်းမာရလဒ်လောင်းအပြင်အနံ့မရှိဘဲ Bsf ခေတ်မီလယ်ယာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ။ လည်း, အနံ့ပေါများခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သည့်ရလဒ်များကိုကြောင်းရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏လုံခြုံရေးအာမခံပါသည်။
စိုက်ပျိုးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်လောက်အတွက်ထုတ်ပေးအနံ့စျေးပေါစာကျွေး၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်လက်ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုအလေးအနက်ခြိမ်းခြောက်မှုပါပဲ။ လယ်သမားကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောလယ်သမားရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဘို့ကြွက်, ပိုးဟပ်, မြွေနှင့်ကျန်းမာရေးအဖြစ်ပိုးမွှားဖိတ်ခေါ်အောင်မှတပါးမသက်မသာစိုက်ပျိုးမှုစိတ်ပျက်စရာလောက်။
မဖော်ပြအနံ့နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ညစ်ညမ်းမှုမိသားစုထံမှဆန္ဒပြပွဲများဖြစ်လိမ့်မည်, ဤအနံ့ညစ်ညမ်းမှုနေရာတိုင်းပျံ့နှံ့လျှင်သင်တန်း၏အသိုင်းအဝိုင်းတိတ်ဆိတ်စွာနေမည်မဟုတ်။ အတော်များများကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလောက်အချို့ဒေသများရှိဖြစ်ပွားမှုဥပမာနှစ်စဉ်ပြေးပြီးနောက်နောက်ပိုင်းတွင်သရုပ်ပြနိုင်ငံသားများအတွက်ပိတ်ရပါမည်။
ဤအခြေအနေ၌စစ်တိုက်ခဲ့အလွန်အဘိုးထိုက်သော, အခညျြးနှီးပင်ပန်းသည်။ ထို့ကွောငျ့, အနံ့မရှိဘဲအစောပိုင်းအလုံအလောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီစဉ်သေချာပါစေ။ သင်အမှန်တကယ်စီးပွားရေးဒေဝါလီခံစီစဉ်မထားဘူးဆိုရင်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်များနှင့် BERSIHLAH Indonesiaku SAVE အောင်မြင်ရန်ကြိုးပမ်းပါ။ အဲဒီမှာလောက်အလုပ်နေ့စဉ်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန် SOP (စံစစ်ဆင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း) စံ Make အတွက်ပြီးသားကြောင်း 10 အလုပ်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ်ငါတို့ရှိသမျှသည်အင်ဒိုနီးရှားလျှောက်လုံး 99 မြို့ကြီးများကိုကျော်ဖြန့်ရပြီ။ သငျသညျတည်နေရာကိုသငျသညျအသကျရှငျဘယ်မှာမှအနီးဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။
10 Excellence Yuri BSF အကြောင်း
1 ။ အနံ့မရှိဘဲအတော်များများထုတ်လုပ်မှုလောက်အဆိုပါ။
သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာသင်အင်ဒိုနီးရှားတွင် 99 မြို့ကြီးများအတွက်ရှေးခယျြနိုငျကွောငျး petrnakan အတွက်အလေ့အကျင့်သင်ယူရာမှ စတင်. , အနံ့မရှိဘဲလောက်ထုတ်လုပ်ရန်သုညကနေပဲ့ထိန်းပါလိမ့်မည်။
အားလုံးနေ့၌သင်တို့အားငါချက်ချင်းပုဂ္ဂလိက (မလူတန်းစားစနစ်က) တွင်တစ်ဦးဆရာအလေ့အကျင့်အားဖြင့်လိုက်ပါသွားနှင့်သင်အောင်မြင်ဖို့အိမ်မှာအလေ့အကျင့်လမ်းညွှန်မှု hngga နှင့်အတူဆက်လက်ပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ အနံ့မရှိဘဲသင်ယူခြင်းပုဂ္ဂလိကပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းလောက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်:
လမ်းညွှန်စာအုပ်တွေများ၏အလေ့အကျင့်နှင့်အတူ PlayStore Yuri လျှောက်လွှာအတွက် BSF ကနေတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ သင်လယ်ယာမှာအလေ့အကျင့်မပြုမီကပိုဖြေလျော့ပေးခြင်းများနှင့်ယုံကြည်မှုသင်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်
သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာအနံ့မရှိဘဲခေတ်သစ် bsf စိုက်ပျိုးကြသူကိုအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့်ပဲ့ထိန်းကျင့်သုံးပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူသည်ထက်ထက်သန်သန် shared အတွေ့အကြုံကို။ သူတို့ခြေလှမ်းတို့ကအသေးစိတ်ခြေလှမ်းအတွက်အနံ့မရှိဘဲဘယ်လိုလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးလေ့အကျင့်ကိုပြသနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအလွန်သင်သည်အကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါ။
သငျသညျဖြစ်ကြပြီးဘယ်မှာ pendudukpun အရှိဆုံးသိပ်သည်းနေရာများတွင် semurna တစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်တွင်သင်ယူကြသည်။
ဒီနေရာတွင်တကယ်သရုပ်ပြအတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲအမျိုးမျိုးသော konsisi မြေယာနှင့်လူဦးရေထူရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်သင်ပေးတယ်။
အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီး, ကျရှုံးခြင်း၏အကြောင်းရင်းများ၏တဦးတည်းကိစ္စပြေလည်နိုင်ပါတယ် uitu ဒီပုဂ္ဂလိကစနစ်ဖြင့်သေးကိုမေးနှင့်အဖို့ရှက်ဖြစ်ကြသည်။ သင်နှင့်မေးရန်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်သို့မဟုတ်အရှက်ကွဲခြင်းမရှိပဲသင်ယူမှုအတွက်ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးဆရာသာသောကြောင့်
သငျသညျ 99 ဆရာသင်လိုချင် options နဲ့သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီသင့်တော်ဆုံးရှိတယ်, မြို့ 99 အတွက်အကောင်းဆုံးဆရာရွေးချယ်နိုင်သည်။
2 ။ 83% အထိမှတပါး dispensing ဖော်မြူလာကျွေးမွေး
လောက်ရှိခြင်းပြီးနောက်သင်အထူးပုံသေနည်းတွေနဲ့လောက်ဗုံးဖောက်ခွဲမှု BSF ရောထွေးနိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့် 83% အထိကယ်တင်
3 ။ လောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး BSF
သငျသညျစျေးကွက်လောက်အကြောင်းကိုမရောထွေးခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ရောင်းဖို့ Yuri BSF !!! ကျနော်တို့လောက်လောက်သင် Rp7.000 / ကီလိုဂရမ်ရောင်းချနှင့်ဝယ်ယူကျေးဇူးတင်ပါတယ်
4 ။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
သငျသညျ Yuri BSF မှလုံ့လဝီရိယရောင်းလောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်။ ထို့အပွငျကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလောက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့အကူအညီ program တစ်ခုပြင်ဆင်ကြပြီ။ တစ်ဦးကထောက်ပံ့ငွေအစောပိုင်း Rp100.000.000 ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုပေးထားသည်။
အဆိုပါထောက်ပံ့ငွေအပေါင်းအဘော်ပြန်လာသောနှင့် wear လောက်ပေးသည်။ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲနဲ့တူညီတဲ့တန်ဖိုး - RIBA မရှိဘဲနဲ့ !!!
5 ။ သံအမတ်ကြီး Yuri BSF
နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်၌, တခါတရံတွင်ဖြေရှင်းခံရဖို့ပြဿနာကြားမှ။ အတူတူသံအမတ်ကြီး Yuri BSF ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ရန်သင့်လယ်ယာအပေါ်ကိုတင်ပြဖို့အဆင်သင့်။
6 ။ Yuri BSF တက္ကသိုလ်
တစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၏အခြေအနေတွင်အဆင့်မြင့်လမ်းညွှန်မှု။ ဒီအစီအစဉ်အတွက် Thhis အကြောင်းရင်းရရှိလာတဲ့လောက်သာလွန်အရည်အသွေးကို၏အရည်အသွေးသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုအဆင့်မြင့် level မှာအဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်ရေးပေးခွငျးဖွငျ့ဖွစျသညျ။
7 ။ လောက်သမဝါယမအင်ဒိုနီးရှား
အမျိုးသားစျေးကွက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့သမဝါယမလောက်အင်ဒိုနီးရှားတက် setting ပါတယ်။ အဘယ်သူသည်အသိုင်းအဝုိင်းဖိုရမ်လောက်မိတ်ဆွေတစ် Yuri BSF ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းလိမ့်မည်။
8 ။ Agroindustri
9 ။ PRO Bono
တကယ်အနံ့မရှိဘဲခေတ်သစ် bsf စိုက်ပျိုးတဲ့အထုပ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါမတတျနိုငျဖြစ်ကြောင်းအထူးသညျသူတို့အဘို့ CSR (Corporate Social Responsibility) ။
ကျနော်တို့တိုင်းခြေလှမ်းအမြဲအလ္လာဟ်အရှင်မြတ် SWT ဖြင့်ကာကွယ်ထားပြုဆုတောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်အတွင်းမသင်မနေရ။
မတူညီတဲ့ကွဲပြားမှုတွေ Yuri BSF ခုနှစ်တွင်လောင်းသင် BSF ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အထူးအစာကျွေးခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။ ဒီဌာနခွဲများ၏ရလဒ်အဖြစ်လောင်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုသင်အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ကမ္ဘာထဲမှာကျော်ကြားကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း. အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြု. အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအပေါ်အာရုံစိုက်။ Yuri BSF လောက်၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်အများအပြားပါတီများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းဖွင့်လှစ်။
မူလစာမျက်နှာမှာတစ်ယောက်တည်း EM4 Make ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်လက်တွေ့နည်းလမ်းများ